Marsariitii kana irraa maallaqa argachuu dandeessu - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Marsariitii kana irraa maallaqa argachuu dandeessu
By Alifu Haji	Creativity, Technology March 22, 2019
Akkam jirtan hordoftoota marsariitii www.barataa.com? Nageeny badhaadhaa? Marsariitii haaraa Afaan Oromoo oduu aagaa qabattee dhufte takkaan wal isin barsiisuu feena. Maqaan marsariitichaa www.jirraapress.com yoo tahu, marsariitii oduuwwanii fi bashananaati. Kana malees, marsariitii hawaasummaati. Itti fayyadamaan irratti galmaa’uudhaan odeeffannoolee gara garaa waliif iddoo itti danda’uudha.
Itti fayyadamaan marsariitii ##jirraapress fayyadamu tokko, guyya guyyaan maallaqa argata. Maallaqni kun kan sobaa osoo hin taane, kan dhugaati. Akkamitti yoo jettan itti fayyadamaan tokko maallaqa ##jirraapress irraa argachuuf dursa gara toora website isaanii www.jirraapress.com/register kan jedhu deemuudhaan galmaa’uu qaba. Galmaa’uudhaaf tartiiba armaan gadii kana hordofi.
Jalqaba irratti gara fuula www.jirraapress.com fuulefachuudhaan register kan jedhu irratti cuqaasi
Fuulli galmee akka suuraa armaan gadii mul’atu kanatu siif baha. Ati immoo odeeffannoolee sirraa eeggaman haalata an itti guute Kanaan guuti. Erga guuttee booda complete signup kan jedhu irratti cuqaasi.
Gaafa complete signup irratti cuqaaste ergaan tokko gara toora sanduuqa email keetti ni ergama. Email kee bani. Ergaan siif dhufu inbox keessaa gaafa dhabde toora spam keessa darbuu danda’a waan taheef, achi keessas ilaali.
Email siif ergame banuudhaan link siif ergame irratti cuqaasi
Gaafa liinkicha siif dhufe san cuqaaste fuula akka suuraa armaan gadii kanatu siif banama. Activate kan jedhu irratti cuqaasi.
Haala milkaa’inaan toora www.jirraapress.com irratti galmooftee jirta jechuudha.
Haala armaan olii kananiidha kan ##jirraapress irratti galmooftu. Erga galmooftee booda, gara gola keetii seenuudhaan qabxii kee ilaalachuu, hiriyaa haaraa marsariiticha irratti uumachuu, hiriyaa keef ergaa barreessuu, qabxii gara garaa kennuufii, akkasumas hiriyaa haaraa gara marsariitii kanaa affeeruu, gareewwan gara garaa uumuu, yaadota gara garaa barreessuu, yaadota gara garaaf deebii kennuu fi wantoota kana fakkaatan heddu raawwachuu dandeessa.
Yeroo wantoota kanneen rawwattu, ##jirraapress qabxii siif qabaa deema. Qabxiileen kunniin ol guddachuudhaan gara maallaqaa, kaardii moobaayilaa, daataa moobaayilaa fi wantoota gara garaatti jijjiiramuu.
Qabxii kankee marsariitii kana irratti olguddifachuudhaaf wantoonni itti fayyadamaan tokko gochuu qabu keessaa muraasni
Marsariitii ##jirraapress guyya guyyaan seenee daawachuu
Itti fayyadamaa haaraa Affiliate link isaatiin affeeruu
Oduuwwan gara garaa ##jirraapress irratti maxxanan dubbisuu
Maxxansootaaf yaada barreessuu
Fi wantoota gara garaa achirratti hojjadhu jedhaman raawwachuudhaa.
Icciitiin biraa tokko an isinitti himu, maxxansa gaggaarii marsariiticha irratti barreesita taanaan qabxii fi maallaqa guddaa argachuu kan dandeessu tahuu isinitti himuu barbaada.
Maarre, maal eegduree? Yaadaa fi barreeffama kee mala salphaan gara maallaqaatti jijjiiruun amma waan taheef, carraa kanatti fayyadamaa isiniin jenna!!
Creativity, Technology November 23, 2018
Artificial Intelligence : Eessa irraa jalqabee baruun danda’a
Career Life, Creative, Creativity, Ideas, Influence, Success, Suggestions, Technology March 12, 2019
Biloogii akka itti jalqabe